Akụkọ - Ngwa ihe atụ nke SWMC drilling rig in engineering fotovoltaic
Site na ụkọ ike ọdịnala na-arịwanye elu, mmepe na itinye ume ọhụrụ emeela ka mba niile n'ụwa nwee mmasị. N'otu oge ahụ, ike ọhụrụ nke China na-emepe ngwa ngwa, teknụzụ ejiri nwayọ nwayọ, na-eru nso ma ọ bụ na-eru ụwa larịị. Ya mere, mba ahụ na-ebute usoro mmepe, ebumnuche dị iche iche, ọrụ ndị bụ isi na usoro iwu nke fotovoltaic.
Ihe oru ngo ike nke fotovoltaic, nke nwere ikike arụnyere nke 40MWP (MW), dị na Wulanchabu obodo, Inner Mongolia Autonomous Region, na elu nke ihe dịka 1500-1520 mita, nke ikuku ihu igwe na mbara ọzara na mbara igwe N'ịbụ nke nrụgide nke Mongolian Plateau na-emetụta, ọnọdụ kachasị dị na 36.5 degrees, opekempe okpomọkụ bụ mwepu ogo 39, oke omimi nke ala oyi kpọnwụrụ bụ 220cm, oke omimi nke snow bụ 19cm, yana nkezi kwa afọ ọdịda bụ 315.3mm.
Lọ ọrụ na-emepụta ihe mechara kpebie usoro mkpokọta fotovoltaic dị ka ndị a: oghere 150mm, oghere miri emi nke 1.0-1.5m.
SWMC nyere 8 nkeji SWMC 370 igwe na-egwu mmiri nke kwesịrị ekwesị maka ihe owuwu fotovoltaic, 5 nkeji SWMC 360 igwe igwe na-agbasi ike, ikike 3 SWMC D50 igwe na-adaba maka ngwa ngwa ala dị larịị maka saịtị fotovoltaic, ngụkọta nke 7 setịpụrụ SULLAIR American 600RH na 550RH ikuku compressors, 4 na-eme Fusheng Elman 630 ikuku ikuku, na 5 na-etinye Liuzhou Fuda 180-19 compres compressors.
SWMC 370, SWMC 360 na SWMC D50 driller na-eji crawler na-eje ije, nke nwere ezi mgbanwe nke ala, ezigbo nkwụsi ike yana arụmọrụ nchekwa dị elu.Ọdịdị nke ike nke igwe rotary buru ibu, enwere ike mezue ya n'otu oge n'okpuru ọnọdụ ala dị ka okwute okwute na fosili, n’achọghị ịgba nke abụọ.
Sullar ikuku compressor, Fushenger ikuku Compressor, Liuzhou Fidelity ikuku compressor, mgbe na-egwu ala nnukwu oghere iji nọgide na-enwe nrụgide kwụsie ike, iji nọgide na-agba nke usoro dum.
Ikike ogo 40 nke Drilling Rigs nke SWMC 370 na SWMC 360 na-eme ka ọganihu nke ọrụ a. SMC na-egwupụta igwe eji ọkụ eletrik arụ ọrụ iji kpoo olulu oghere ahụ na nke dị elu, nke mezue ọrụ ike siri ike ya. akụkụ n'ọnọdu, ọsọ ọsọ ma zie ezi na mkpọpu ala, iji zere igbu oge.
Drilling rigs SWMC 370, SWMC 360 na SWMC D50 na-onwem na submersible impellers mgbe egwu ala site na akwa n'ígwé. Mgbe egwu ala n'ime ala na mgbe ahụ dochie auger anwụrụ oyiyi akwa.
Site na 16 mkpọpu ala RIGS na oru ngo ahụ, arụ ọrụ mkpọpu ala nke usoro 4 1MW (ngụkọta nke otu 800 na oghere 6,400) ka emechara n'ime otu ọnwa, nke mere ka ọrụ na nhazi oge ahụ dị mma, ọ nweghịkwa ihe ọghọm nchekwa mere n'oge usoro ihe owuwu ahụ. N'otu oge ahụ, jikọtara ya na njirimara nke ọrụ saịtị ahụ, dịka ọnọdụ obodo dị iche iche iji mee usoro ihe owuwu dị iche iche, usoro nhazi oghere ahụ dị mma, ezigbo mma, mgbe nyocha nke ndị ọzọ gasịrị, ihe nyocha niile na-ezute ndị isi na nhazi chọrọ, na nwetara ahụmịhe kachasị mma, na uru maka ngwa ọrụ owuwu ọdịnihu.